एमसीसीलाई बोकेर हिँड्नु भनेको आगोको भुंग्रोमा पस्नुजस्तै हो : विप्लव - गोकर्णेश्वर खबर
एमसीसीलाई बोकेर हिँड्नु भनेको आगोको भुंग्रोमा पस्नुजस्तै हो : विप्लव
गोकर्णेश्वर खबर६ आश्विन २०७८, बुधबार २२:०९ मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) ३४ पाठक संख्या
पोखरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले विप्लवले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता भएको बताएका छन् । पोखरामा बुधबारदेखि शुरु भएको अखिल क्रान्तिकारीको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले नेपालको ‘राजनीतिक भाँडभैलो’ र ‘असफल’ राज्यमा अमेरिकाले फाइदा उठाएर हिँड्न चाहेको दाबी गरे ।
विप्लवले जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको एमसीसीबारेको तर्क सुनेर आफूहलाई अनौठो लागेको बताए । ‘अमेरिका गएर फर्किएपछि बाबुरामजीको तर्क सुन्दा अनौठो लागिराछ,’ उनले भने, ‘सिन्धुलीमा गएर यो किन विरोध गर्ने ? जेको पनि विरोध गर्ने भन्नुभएछ । बाबुरामजी त्यहाँ पुग्नुभा’छ । हाम्रो एकदम सदासयता छ । तर, एमसीसीलाई बोकेर हिँड्नु भनेको आगोको भुंग्रोमा पस्नुजस्तै हो ।’
उनले हालको संसदीय व्यवस्था फेल भइसकेको दाबी गर्दै परिवर्तनका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने दोहो¥याए ।
महासचिव विप्लवले सरकारले आफूहरुसँग गरेको तीनबुँदे सहमति पालना नगरे त्यसलाई तोड्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउन सरकारले अर्को शर्त थोपर्न खोजे वा घुमाउरो घेरा हाल्न खोजे आफूहरुले त्यसलाई तोड्ने उनको भनाइ छ ।
बुधबारबाट शुरु भएको अखिल क्रान्तिकारीको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन असोज ८ गतेसम्म चल्नेछ ।